Ungasibhala Kanjani isithombe se-3D - uLucidPix
Ungasibhala Kanjani isithombe se-3D
Ngaphambi kokuqala ohambweni lwakho lokuthatha izithombe lwe-3D, udinga ukwazi ukuthi yini ebalulekile-ukuthi ungasibumba kanjani isithombe se-3D! Sikunikeza imininingwane evela ochwepheshe eLucidPix ukusiza ukuqondisa ukuthi uzithatha kanjani izithombe zakho uma udubula ku-3D. Lezi zingcweti bezisebenza ngaphakathi komkhakha wezobuchwepheshe be-3D iminyaka engaphezu kwemine futhi uma ulandela amathiphu abo namaqhinga, uzokwazi ukuthuthukisa amakhono akho wokuthwebula jikelele.
Ukuthola okuningi okuthunyelwe kwebhulogi okuhlobene nalesi sihloko, hlola Ungasithatha kanjani isithombe esihle kakhulu se-3D!
Ithiphu # 1 Gwema izandla ebusweni
Qiniseka ukuthi isihloko sithombe sakho sicacile kunoma yikuphi ukuphazamiseka futhi lokhu kufaka nezandla ebusweni! Noma isithombe esingezansi sinobuciko obukhulu, isandla kungenzeka singadluliseli ku-3D. Siphakamisa ukusebenzisa isithombe kwesokudla njengesibonelo!
Icebo # 2 I-bokeh engaphezulu, engcono
Yini i-bokeh ongayibuza? IBokeh iyindlela yokuthatha izithombe lapho kugxilwe khona endabeni ethile futhi isikhala esizungezile siba mdaka, sikhonjiswe esithombeni esingezansi. Futhi njengoba iheha ukubona, ibuye ihumushe kahle kuyi-3D. Ukuthola kabanzi nge-bokeh, hlola lokhu i-athikili enezinye izincazelo nezinye izibonelo. Ungahlola futhi eyethu blog blog mayelana bokeh.
Icebo # 3 Faka isihloko esigcwele ohlakeni
Bheka isithombe esingezansi ukuthola ugqozi. Njengoba ukwazi ukubona, isihloko sinendawo eningi yanoma iluphi uhlangothi, ngaphezulu nangaphansi, okuqinisekisa ukuthi umuntu ngamunye uhlala ngaphakathi kohlaka. Ngesikhathi senqubo yokuguqulwa kwe-3D, ubuhlakani bokufakelwa obona ukujula kwesithombe buye buthambekele ngaphakathi. Uma isihloko sakho sisondele kakhulu emaphethelweni wesithombe, kungenzeka sikhishwe yi-AI kwinqubo yokuguqulwa ye-3D.
Ithiphu # 4 Gwema imigqa emincane
Lapho uthatha izithombe ze-3D, kungcono ukugwema imigqa emincane. Lokhu kungafaka izintambo noma amagatsha, ngeshwa, avele kahle futhi kwesinye isikhathi kungonakalisa ukubukeka kwesithombe sakho kwe-3D. Okufanayo kuya kocingo lwesixhumanisi sokuxhuma noma izinwele eziqhekekile, njengoba kuchaziwe ngezansi.
Icebo # 5 Gwema izinto ezisobala noma ezikhanyisayo
Kuzithombe ezijwayelekile, izithombe ezisobala nezibonisayo kunzima ukuzithatha kahle, futhi lokhu kubonakala kakhulu ngaphakathi kwezithombe ze-3D. Izithombe ezifana nalezo ezingezansi azihumushi kahle ku-3D, ngakho-ke siphakamisa ukuthi kuthathwe isithombe ngezihloko eziphakeme kakhulu ukuze izinto zichazwe ngokucacile futhi kube lula ukuthi i-AI icubungule.
Ufuna ezinye izithombe zesampula? Ngabe udinga amanye amakhasi we-Facebook ukulandela? Hlola Izithombe ezinhle kakhulu ze-LucidPix 3D futhi Izithombe zeLucidPix ze-3D ku-Facebook! Ungase futhi ungene kwi-Instagram yethu @LucidPix ukubona amavidiyo amahle e-3D esiwadalile!
Izithombe Zethu Ezithandekayo Ze-3D ku-Facebook →← Izinhlelo ezi-5 eziphezulu kakhulu Zezithombe Zeselula